Teboka vavaka hanoherana ny mpanimba Destiny | TOKO VAVAKA
Alatsinainy, Aogositra 2, 2021
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny mpanimba
Teboka vavaka hanoherana ny mpanimba
Janoary 25, 2021
Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka amin'ireo mpandrava anjara. Iray amin'ireo zavatra marobe izay manakana ny lahatra tsy hahatratra ny fahatanterahana dia ireo mpandrava anjara. Misy lehilahy sy vehivavy notendren'ny devoly hiantoka ny fahapotehan'ny ain'ny olona ary hahena ny anjarany alohan'ny hahatongavan'ny zava-misy.
Ny fiainan'i Samsona dia ohatra iray mahazatra. Ny faneken'Andriamanitra dia teo amin'ny fiainany. Natao mpanafaka ny zanaky Isreal izy. Nomen'Andriamanitra hery sy hakingana tsy hay hazavaina izy. Araka ny tatitra, ny herin'i Samsona dia manoatra ny an'ny zato lahy rehefa atambatra. Ny tanjony dia ny hanafaka ny zanak Isreal amin'ny mpampahory azy izay ny Filistina.
Na eo aza izany, satria Andriamanitra dia mikasa ny hamonjy ny olon'ny Isreal amin'ny alàlan'i Samsona, dia toy izany koa ny devoly mikasa ny hamotika ny anjaran'i Samsona hanakana azy tsy hanatanteraka ny tanjon'ny fisiany. Isaky ny hanapotika ny tanjon'ny olona ny fahavalo dia manomana Delila izy ireo hanatanterahana ilay asa.
Delila dia afaka nanimba ny anjaran'i Samsona taorian'ny nahavoa azy. Ilay lehilahy izay tokony ho mpanafaka dia lasa babo, maty niaraka tamin'ny fahavalony ihany izy tamin'ny farany. Toy izany koa amin'ny fiainantsika, tsy maintsy mailo ara-tsaina sy ara-panahy isika hahatsapa ny asan'ny fahavalo hahafantatra ny fomba fikirakirana azy.
Indraindray, ny mpandrava anjara dia mety ho avy amin'ny fianakaviana, mety ho avy any am-piasana, mety ho avy any am-pianarana aza. Ny fahavalo dia afaka mampiasa olona na iza na iza ho fandrika hanimbana ny anjaran'ny olona. Mba hisorohana ny hoavintsika dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao.
Fomba dimy hisorohana ny fahaverezana
Aza manao tsinontsinona
Amin'ny maha mpino antsika dia tokony ho hendry isika. Ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny 2 Korintiana 2:11 Fandrao manararaotra antsika satana; fa tsy fantatsika ny hafetseny. Tsy tokony tsy ho fantatsika ny hafatry ny devoly. Fanahy ratsy mampihomehy ny devoly, manandrana mamitaka antsika izy amin'ny finoana fa manao ny tsara isika.
Tratran'ny fitiavana demonia tamin'ny vehivavy avy tany an-tany hafa i Samsona. Tsy nanam-pahendrena izy ka nilaza fa nitaingina ny tsy fahalalany ny fahavalo. Tena ratsy tara loatra ho azy rehefa avy nahavita nanolotra azy tamin'ny fahavalony i Delila. Tokony ho hendry amin'ny fotoana rehetra isika.
Tokony ho ara-panahy isika
Ny soratra masina dia milaza fa raha mitoetra ao aminao ilay fanahy nanangana an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, dia hamelombelona ny vatanao mety maty izany. Tokony hiezaka ny hanana ny fanahy hatrany isika. Ny iray amin'ireo fomba hamantarantsika ireo fitaovan'ny devoly dia amin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina. Ary rehefa tsy fanahy isika, dia tsy ho fantatsika izay lazain'Andriamanitra.
Natao nofo aman-dra isika, fa fanahy kosa. Ny fomba tokana ahafahantsika mifandray amin'ny vavahadin'ny fanambarana dia amin'ny fijanonana mafy amin'ny fanahy
Ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ny lanitra dia amin'ny alàlan'ny vavaka tsy tapaka izay fantsom-pifandraisantsika. Ny fiainam-bavaka ataontsika dia hamaritra raha toa ka handresy ny fiainantsika ilay mpandrava anjara na tsia.
Nampitandrina ny soratra masina fa tokony hivavaka tsy misy vanim-potoana isika satria ny fahavalontsika dia ny fahavalo mandehandeha tahaka ny liona noana mitady izay hohaniny. Tsy nahagaga raha nivavaka tamin-kafanam-po i Kristy tamin'izay ora efa ho madiva ho nalain'ny fahavalo izy.
Indraindray, ny mpandrava anjara alefan'ny fahavalo dia ny hakamoana sy mangataka andro. Ny tsy fahafahantsika manao ireo zavatra izay tokony hataontsika amin'ny fotoana mety dia mety hanimba ny anjarantsika. Sarobidy ny fotoana ary tsy miandry olona. Izany no antony tsy maintsy hanararaotantsika ny fotoana rehetra.
Izany no antony tsy maintsy hiezahantsika hanao ny tsara amin'ny fotoana mety.
Tapaho ny herin'ny fetra
Ny famerana dia fahavalon'ny fahalehibeazana. Mitsangàna anio ary mandrava ny fetra. Miala amin'ny herin'ny famerana. Ny lehilahy dia vokatry ny eritreriny. Rehefa mahatsapa ianao fa voafetra dia mametra ny mety ho vitanao tsy hiseho amin'ny endrika feno.
Ny soratra masina dia milaza fa ny tany dia Tompo sy fahafenoana. Zanak'Andriamanitra ianao, midika izany fa anao izao tontolo izao. Minoa fa tsy manam-petra ianao ary hahatratra potika lehibe.
Teboka amin'ny vavaka:
Ray Tompo ô, tonga eo anatrehanao anio aho hanoratra ny faniriako hanatanteraka ny lahatra, hanatanteraka tanjona, mivavaka aho mba hanampianao ahy hanatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga manohitra ny endrik'ireo mpandrava anjara lahatra rehetra aho izay manotrika hisakana ny anjarako tsy ho tonga amin'ny fahatanterahana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, tonga hamely ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra nalefa tamin'ny fiainako avy tamin'ny fanjakan'ny maizina aho mba handrava ny anjarako, handringana azy ireo amin'ny afon'ny fanahy masina aho.
Tompoko, tonga hamely ireo biby ratsy rehetra nalefa taty amiko aho mba hanalefaka ny ezaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, potehiko ny endrika hakamoana rehetra amin'ny fiainako. Ny fanahin'ny fihemorana rehetra izay natao hamonoana ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga manohitra ny endrika tsy fahalalana rehetra ataon'ny fahavalo handrava ny Lahatrao aho. Manome didy aho manomboka izao fa hendry amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompo ô, mivavaka aho mba homenao ahy ny fanahinao. Ny fanahin'ny Tompo izay hanambara amiko zava-miafina, avelao hitranga amiko amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Tompoko, mandà ny tsy hahalala ny hafatry ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Izay lehilahy na vehivavy ratsy fanahy rehetra izay nirahina hamoaka ahy am-pitiavana mba hanapotika ny anjarako dia hianjera amin'ny fahafatesana anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Miantso fisarahana masina eo anelanelan'ny mpandrava anjara sy ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Noforonina ho amin'ny tanjona iray aho, mivavaka amin'ny herin'ny Lanitra mba tsy ho potika amin'ny anaran'i Jesosy ny tanjoko.
Manomboka izao dia manomboka mahazo fitarihana avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aho. Manomboka miseho amin'ny endrika Jesosy ny fiainako.
Tsy mety manao zavatra mifototra amin'ny fahalalako an-tany. Ny zavatra hataoko rehetra dia hifanaraka amin'ny Sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandringana ny endrika fetra rehetra mety hanakana ny fahombiazako eo amin'ny fiainana aho, aringako amin'ny anaran'i Jesosy.
fanatanterahana ny lahatra
vavaka manohitra ny mpandrava anjara
Previous lahatsoratraTeboka vavaka ho fanatanterahana ny lahatra
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny famoretana
Teboka vavaka hanoherana ny fanahin'ny ranomasina
Teboka vavaka hialana amin'ny famoizam-po amin'ny maha mpino anao
Teboka vavaka mba hitsodrano trano vaovao
Stella mwaniki 29 Janoary 2021 Amin'ny 1:05 hariva
Misaotra anao mamonjy ahy tokoa amin'ny fombam-bavakao enga anie ka hanohy hanampy ny hafa koa ianao. Fitahiana eo anilako foana izany.
Eferhijesu 10 Febroary 2021 Amin'ny 9:14 maraina
Haleloia! Misaotra Andriamanitra hitahy anao
Antony 5 Mila miezaka mafy hahalala bebe kokoa an'Andriamanitra ianao
Jolay 30, 2021
Andininy Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao
Antony 5 Ny Kristiana tsirairay dia tsy maintsy mitory filazantsara
Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly78
Fiainana araka an'Andriamanitra10
Zava-bavaka 100 ho an'ny vehivavy
Novambra 8, 2019
Andininy 30 ao amin'ny Baiboly momba ny fiainana mandrakizay kjv
Oktobra 25, 2018
Fitiavana maraina: IZAY HITANAO IZAO
Aogositra 8, 2019
Teboka vavaka manohitra ny fanahy mandany fotoana
Aprily 22, 2021